प्रधानमन्त्री ओलीलाई मोदीको यस्तो प्रस्ताव ! – Life Nepali
प्रधानमन्त्री ओलीलाई मोदीको यस्तो प्रस्ताव !
काठमान्डौ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दिल्लीमा उ’पचार गराउन भारती प्रधानमन्त्री मोदीले प्र’स्ताव गरेको बुझिएको छ ।ओलीको स्वा’स्थ्य अ’वस्थाका बारेमा छिमेकी देशका नेताहरुले समेत चा’सो दिँदै आएका छन् ।मोदीले यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीलाई विदेशमन्त्री एस जयशंकरमार्फत उपचारका लागि दिल्ली आउन प्र’स्ताव गरेका हुन् ।भारतको विदेशमन्त्री नि’युक्त भएपछि जयशंकर तीन महिनाअघि नेपाल आएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले १२ वर्षअघि दिल्लीको एपोलो हस्पिटलमा मृ’र्गौला प्र’त्यारोपण गरेका थिए । तर, चार वर्षअघि संविधान जारी गरिएका बेला दिल्लीको चासोलाई अ’स्वीकार गरेपछि दिल्लीसंग सम्बन्ध वि’ग्रिदा ओली फ’लोअपको लागि भारत गएका छैनन् ।ओली नजिकै दिल्लीमा जानुभन्दा पनि सिंगापुरलगायतका अन्य देश गइरहेका छन् । काठमान्डौ टुडेले खबर लेखेको छ।
यो पनि पढ्नुहोस -भारतवि’रूद्ध अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाऊँ, सीमामा सेना खटाऊँ’
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले भारतवि’रूद्ध अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जानुपर्ने बताएका छन् । राज्यव्यवस्था समितिको बै’ठकमा सांसद सुवालले भारतले नेपालको भूमि आफ्नो नक्सामा राखेपछि अब अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जानुपर्ने तर्क गरेका हुन् । उनले ३५ दिनभित्र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा भारतवि’रूद्ध मु’द्दा दिनुपर्ने बताए । नेपालमा रहेका भारतीय राजदूतलाई स्प’ष्टीकरण सोधिनुपर्ने र अरू राजदूत सबैलाई बोलाएर कालापानी भारतले मि’चेको जानकारी गराउँदै सहयोगका लागि आ’ग्रह गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
खुला सीमा सु’रक्षाका लागि नेपाली सेना पठाउन पनि उनले माग गरे । बै’ठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले कालापानीमा सु’रक्षा पो’स्ट राख्ने तयारी भइरहेको बताए । थापाले दार्चुलामा सीमा सु’रक्षा ब’ल रहे पनि विवादित भूमिमा सुर’क्षापोस्ट नरहेकाले राख्न लागिएको जनाएका हुन् ।“दार्चुलामा सीमा सु’रक्षा ब’ल छ । वि’वादित क्षेत्रमा छैन, अपुग छ । त्यसलाई म’जबुत गर्नुपर्छ । विवादित क्षेत्रमा सु’रक्षा पो’स्ट विस्तार गर्ने तयारीमा गृह मन्त्रालय छ,” बै’ठकमा थापाले भने । उनले कालापानीको स’मस्या ६ दशक लामो भएको बताउँदै स’मस्या स’माधानमा सरकार ग’म्भीर रहेको दा’बी गरे ।
नेकपाकी सांसद पम्फा भुषालले सीमा नि’यमन गर्नुपर्ने र खुला हुन नहुनेमा जो’ड दिइन् । उनले भनिन्, “सीमाको कुरा कति उठाउने रु सशस्त्र प्रहरीलाई सीमा सु’रक्षामा लगाउनुपर्छ । सीमा अ’तिक्रमण भारतको सशस्त्र फो’र्सले गर्छ, यो राम्रो कुरा होइन। राष्ट्रियता माथि नै चु’नौति छ । ज’टिल स्थितितिर जाँदैछौं हामी ।”समितिको बै’ठकमा प्रधानमन्त्री केपी ओली पनि सहभागी हुने का’र्यसूची भए पनि ओली भने उपस्थित भएनन् ।
Previous ‘लाइफ ड्यामेज’ अघोरी बाबा’ र श्रीमति शारदा पाण्डे प्रहरी नियन्त्रणमा !
Next काेरियाबाट फर्केर ऊन कपडा उद्योग खाेलेका युवाकाे वार्षिक ४० लाख कमाइ सेयर गरौ !